Mpitantana fanatanjahantena: nahazo ny diplaoman’ny CIO i Rosa | NewsMada
Mpitantana fanatanjahantena: nahazo ny diplaoman’ny CIO i Rosa
Nomen’ny komity iraisam-pirenena olympika (CIO), diplaoma, Rakotozafy Rosa, talen’ny spaoro federaly (DSF). Izy izany izao no Malagasy voalohany nahazo izany. Noho ny zava-bitany, fony izy mbola atleta sy ny fahaizana nitantana ny fikambanana nisy azy ny Amao ary ny rindran-damina teo amin’ny asany teo anivon’ny minisitera, no anisan’ny tombon-dahiny ka naharesy lahatra ny CIO, hanolotra azy izany diplaoma izany.
Notsiahiviny fa nanampy betsaka azy, ny komity olympika malagasy (Kom), niara-niasa sy nikarakara ary nandefa ireo momba azy, tany amin’ny CIO, nahafahana nahazo izany marim-pahaizana izany. Ankoatra izay, tsy nanadino ny nisaotra ireo minisitra roa, Andriamosarisoa Jean Anicet, nitantana teo aloha sy i Tsihoara Faratiana, minisitra ankehitriny, izay samy nanankina ny tenany hisahana ny maha talen’ny spaoro federaly azy, andraikitra mavesatra sy goavana.
Nambaran’ny sekretera jeneralin’ny Kom, Andriamanarivo Harinelina fa zava-dehibe ho an’i Madagasikara, ny nahazoan’i Rosa, io diplaoma io satria izy izany izao no masoivohon’ny fanatanjahantena malagasy, manerana izao tontolo izao. Midika koa fa manara-maso sy mijery akaiky ny fanatanjahantena malagasy ireo rantsa-mangaika rehetra any ivelany. Nanolotra fisaorana manokana ho an’ny CIO, i Rosa noho ity diplaoma, azony ity.